थाहा छ ? यस्तो पो रहेछ महिलालाई से/क्स भन्दापनि बढी मनपर्ने कुरा ! – Jagaran Nepal
डेली स्टारको रि’पोर्ट अनुसार आफूलाई मन परेको केकका लागि महिलाहरु र -/क्सी पि उन र १३ प्रतिशत महिलाहरु मोबाइलको प्रयोग गर्न बन्द गर्ने गर्दछन् । यो अनुसन्धान २२०० महिलाहरु बिच ‘नेशनल केक विक’ को दौरान गरिएको हो। ६ जनामध्ये एक महिला आफूलाई मन परेको केक खानका लागि शा/ रिर-क स’म्ब-न्ध बनाउन चाँहदैनन् ।
उक्त सर्वेक्षणका निर्देशक कपलिंगका अनुसार मानिसहरु आजकाल केक देखेपछि नखाई बस्नै सक्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘केक सबै मानिसहरुको मनपर्ने खानामा परेको छ । उक्त सर्वेक्षणले निकालेको निष्कर्ष अनुसार आठमध्ये एक कर्मचारी आफ्नो बोसलाई खुसी बनाउनका लागि केक खुवाउन मनपराउँछन् ।यस्तैमा ११ प्रतिशत पुरुषहरु आफ्नी प्रेमिकाको मन जित्नका लागि केक नै पहिलो रोजाई हुने बताउँछन् ।
यसअघि मिडियामा धेरै कुरा भनिसकेकाले म यो विषयमा धेरै बोल्न चाहन्नँ । म के सम्म भन्छु भने हामीले विवाह गर्ने–नगर्ने विषयमा केही सोचेका छैनौं । सोच्दै नसोचेको विषयमा केही भन्न मिलेन । भविष्यको कुरा त्यति नै बेला थाहा होला । जिया निकै असल साथी हुन्, मेरी राम्रो साथी हुन्, शुभचिन्तक हुन्।